“YOO DUBBANNE BUUBBEE YOO CALLIFNE BUQQEE” – Welcome to bilisummaa
“YOO DUBBANNE BUUBBEE YOO CALLIFNE BUQQEE”
bilisummaa November 30, 2014	Leave a comment
“Akka hin nyaanne
Akka hin dhiifne
Waa itti carreessitee”
Kunoo dubbiin tiyya
Tan akkasii taate
Gad baasee himachuu
Maalaatu na dhibe,
Furmaata hin garre
Osoo wanni jedhan
Dilli tokko jiruu
Akka itti jedhantu
Nama dhiba garuu
“Yoo dubbanne buubbee
Yoo callifne buqqee”
Akkas narraa taate
Tanaatu na cinqe.
Obsuun silaa gaarii
Akki Oromoon jatte,
Yoo obsines garuu
Hin jiru furmaanni!
Yoon baasee dubbadhe
Furmaanni ni jiraa?
Yaada koo deeggara?
Natti wal qarqabdee
Afaan qaphe firraa.
Dhugaa lafa jirtu
Silaa bar gaarumaa
Kan fashalsuu dhufa
Dubbii faallaa godhee
Tana hundan argaan
Akka jedhu dhabee
If keessatti sase
Ana qofaa miti
Shira xaxxuu sodaa
Firraa itti dhiise.
Hanga yoom obsinaa?
Mataa lafat qabnee
Tan natti jirtulleen
Kunoo dubbii tanaa
Dubbachuu moo obsuu
Tamtu irra as aana?
Onneen too haphatte
Yaanni keessa guutee
Sammuun too jeeqamte
Naaf himaa yaa firaa…
falli yoo jiraate.
yoo falli jiraate.
Tags aadaa Najiib Zannuun obsaa Oromoo walaloo
Previous YAASIR, SUMEYYAAH, AMMAAR
Next The Cruel Massacre of the Dictator Ethiopian Government on Oromo People Can Not Be a Treat to The Oromo Struggle!